2 Siyaabo Sahlan ee Root Nexus 7
Afjarno aad Nexus 7 aad ka faa'iideysan doonaan wax badan - qaataan si buuxda gacanta u gaar ah noloshaada mobile: download barnaamijyadooda fiican Google Play, cusboonaysiiso nidaamka qalliinka Android ugu dambeeyay si xor ah, uninstall barnaamijyadooda pre-rakibay ka qalab aad, kor loogu qaado nolosha batteriga oo dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa sidoo kale ka baqin soo afjarno ay Nexus 7, sababta oo ah habka rooting u geliyey waxaa laga yaabaa in Nexus 7 galay halis, sida lagu bricked. Dhab ahaantii, ma aha in aad walwasho ku saabsan. Ma aha in ay adag tahay. Afuufa 2 siyaabo fudud ayaa lagu bilaabaa inuu kaa caawiyo inaad hesho hawsha oo dhan. Waxa kaliya ee aad qaadataa dhawr daqiiqo si aad u Nexus 7 rujin.
Xulashada 1: Root Nexus 7 la-Guji One Root ee MobileGo (habka ugu nabad badan) ee
Xulashada 2: Root Nexus 7 la Root Nexus u Qalabka (tirtiri doonaa damaanad)
Xulashada 1: Root Nexus 7 la One-Guji Root ee MobileGo (halista ma at dhan)
The Root One-Click waa feature sare gundhig ugu MobileGo . Waxaa loogu talagalay Android phone oo kiniin users kuwaas oo doonaya inay ka rujin qalabka ay Android aan halis kasta. Waa ammaan oo la isku hallayn karo si xididka Nexus 7 la One-Guji ah xididkii ka. Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u isticmaalaan MobileGo in xididka Nexus 7.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi MobileGo on your computer. Hadda waxa kaliya taageeraa nidaamka qalliinka Windows. Ka dib ka dibna waxa aan bilowno.
Tallaabada 2. Isticmaal cable ee digital aad Nexus 7 yimaado leh in ay ku xidhmaan Nexus 7 aad computer. Mise waxaad isku dayi kartaa in ay ku xidhmaan aad Nexus 7 la MobileGo via Wi-Fi. Marka xiran si guul ah, aad Nexus 7 lagu soo bandhigi doonaa MobileGo uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 3. Guji ah 'One-Guji Root' button dhinaca midig ee suuqa, daynin MobileGo samayn rooting aad u. Daaqadda pop-up ka, guji "Ok" si loo xaqiijiyo rooting ah. Inta lagu guda jiro habka rooting ah, weligoodna ma barkinta aad Nexus 7. In daqiiqado yar, waxaad ka heli doontaa ha loo sameeyo.
Pro: Jidka Tani waxay noqon kartaa habka ugu nabad badan rujin aad Nexus 7. ​​Iyadoo sidan, marnaba ma arki doonaa ku saabsan khasaaraha xogta ama gadh wadeenka damaanad inta lagu jiro nidaamka rooting ah.
Con: Si aad u isticmaasho feature sare - Hal-guji Root ee Wondershare MobileGo, waxaad u baahan tahay in aad bixiso ah, anagana yar.
Download MobileGo Wondershare in xididka Nexus 7 hadda!
Xulashada 2: Root Nexus 7 la Root Nexus u Qalabka (wax kama jiraan doonaa damaanad)
Nexus Root Qalabka waa aalad caanka ah ee goobada Android. Dad badan ayaa loo isticmaalaa qalab ay u rujin Nexus 7 guul leh. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta la isticmaalayo, ayaan u sheegaysaa in ay wax kama jiraan laga yaabaa in damaanad ah ee Nexus 7. Laba goor fikir inta isku dayaya this way.s
Tallaabada 1. Download ku Qalabka Nexus Root oo ku xidh on your computer. Inta lagu guda jiro habka rakibidda ah, waxaa ku weydiin doonaa inaad doorato model aad Nexus iyo dhismaha ka android. Just sameeyo sida waxa kuu sameeyo si. Ka dib markaas, waxaad ka arki kartaa suuqa kala of Nexus Root Qalabka hoos ku qoran.
Tallaabada 2. sahlo debugging USB aad Nexus 7 adigoo raacaya talaabooyinka soo socda: Settings> About kiniin> tirada dhista tuubada 7 jeer. In Developer Options, shid debugging USB iyo riix OK.
Tallaabada 3. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad Nexus 7 aad computer. Ka dib markaas, aad Nexus 7, xaqiijiyo "ogolow debugging USB" adigoo "Had iyo jeer u ogolaan ka computer this" iyo "OK".
Tallaabada 4. In Nexus Root Qalabka, marka hore, guji "kaabta" in ay gurmad aad Nexus 7 ka hor rooting ah. Ka dibna riix "Abuur kaabta Nanroid w / Custom Recovery". Haddii kale, marka aad u furid bootloader oo dhan xogta laga tirtirayaa. Later, in Nexus Root Qalabka, guji "Unlock" button in lagu furo bootloader ee Nexus 7.
Tallaabada 5. Click on the "Root" button in rujin aad Nexus 7.
Pro: Nexus Root Qalabka waa qalab dhamaystiran oo lagu kalsoonaan karo in ay xididka Nexus 7.
Con: Si aad u isticmaasho Nexus Root Qalabka, waxaad u baahan tahay in aad ogaato qaar ka mid ah macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan xididka. Haddii aadan waxba ka soo afjarno ogaado, ka dibna waxaa laga yaabaa inay noqdaan adag tahay inaad fahamto sida loo isticmaalo qalab this.